July 2019 – Sonic Generation
သတင်းစာတစ်စောင်ရဲ့ နောက်ဆုံးမျက်နှာကို လှန်ကြည့်လိုက်ပါ။
များပြားလှတဲ့ နာရေးကြော်ငြာတွေကို နေ့စဉ် တွေ့ရမှာပါ။——အသေးစိပ် ဖတ်ရှု့လိုပါက ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်၍ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်—
ဘဝကို နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်စခွင့်ရှိမယ်ဆိုရင်….
မလုပ်ခဲ့ဖူးတာ မသင်ခဲ့ဖူးတာတွေလုပ်ကြည့်ခဲ့ချင်တယ်။ငယ်ရွယ်စဉ် အချိန်တွေကို နှမြောမိတယ် လုပ်သင့်တာတွေမလုပ်ခဲ့မိလို့နောင်တရတာ မရှိအောင်နေချင်တယ်။ ပိုအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားမယ်။
ကျွန်တော် အနားယူမယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းပိုလုပ်မယ်။ချစ်ရတဲ့သူတွေကို အချိန်ပေးမယ်။
ခရီးထွက်နေချိန် အလုပ်အကြောင်း မစဉ်းစားပဲ နေမယ်။
ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို သိပ်ပြီး အရေးတကြီး ခံစားမှာ မပာုတ်တော့ဘူး။
အခွင့်အရေးတွေကို များများ ဖမ်းဆုပ်မယ်။—–အသေးစိပ် ဖတ်ရှု့လိုပါက ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်၍ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်—
ဘရာဇီး ဂန္တဝင်ဘောလုံးသမားကြီး ပီလီ
စစ်မှန်တဲ့ အောင်မြင်မှုပာာ ခင်ဗျားနာမည်ကို မိတ်ဆက်နေဖို့ မလိုပဲ လူတွေက ခင်ဗျားကို သိနေတာပါ။ ဒီစကားပာာ “ပီလီ” လို့ အများသိကြတဲ့ ဘရာဇီး ဂန္တဝင်ဘောလုံးသမားကြီးအတွက် သိပ်မှန်တဲ့ စကားပါ။—-အသေးစိပ် ဖတ်ရှု့လိုပါက ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်၍ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်
USD Index (Daily Chart) ဒီေတာင္ကို ေမာင္ ေက်ာ္ႏိုင္ေလမလား 😕….??? သံုးသပ္ေပးသြားၾကပါဦး…. 🙂😊 #SonicGeneration #Forex #Gold #Trading #Financial #Investment
ခင်ဗျားမမှတ်မိပေမယ့်လည်း ခင်ဗျားပာာ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ကျရှုံးခဲ့ပြီးပြီ။ခင်ဗျား ပထမဆုံး လမ်းလျှောက်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့အချိန်ကလည်း လဲကျခဲ့ပြီးပြီ။ခင်ဗျား ပထမဆုံး ရေကူးသင်တဲ့အချိန်က ရေနစ်ပြီး ရေမွမ်းခဲ့ဖူးတယ် မပာုတ်လား—-အသေးစိပ် ဖတ်ရှု့လိုပါက ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်၍ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်
Today Currency Strength
We are Billionaire Trader
Professional Trader ဆိုတာ
လူတစ်ယောက်က ဆင်စခန်းတစ်ခုကို အလည်လာခိုက် ဆင်တွေကို လှောင်အိမ်ထဲမှာလည်း မထည့်၊ သံကြိုးတွေနဲ့လည်း ချည်မထားတာကို တွေ့ရတယ်။ဆင်တွေရဲ့ ခြေထောက်ကို ရိုးရိုးကြိုးတစ်ချောင်းနဲ့ပဲ ချည်ထားတာ သူတွေ့ရတယ်။ အဲ့ဒီတော့ သူက အံ့သြသွားတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ဆင်တွေက ဒီလို ကြိုးလေးတစ်ချောင်းတည်း ချည်ထားတာကနေ ရုန်းမထွက်သွားတာလဲ။ သူ့အားနဲ့ဆို အေးအေးဆေးဆေး ရုန်းထွက်လို့ရနေတာကို ဘာဖြစ်လို့ မထွက်တာလ-အသေးစိပ် ဖတ်ရှု့လိုပါက ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်၍ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်
Total Website Visits: 307456